Forum serasera malagasy INONA NO TOHINY REHEFA....... - Dinika forum.serasera.org
INONA NO TOHINY REHEFA.......
Fitohizan'ny hafatra : INONA NO TOHINY REHEFA.......
RBNIR - 23/04/2019 12:48
Misy olona maro ankehitriny no misafidy ny hamono tena rehefa misy olana mianjady aminy....
Efa mba nosainin'izy ireny ve anefa hoe mety ho inona marina ny tohiny rehefa tapitra ny ainy???
« Nisy lehilahy manan-karena anankiray niakanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanaram-po fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. » (Lioka 16:19)
« Ary nisy olo-malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny; » (Lioka 16:20)
« ary naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatr'ilay manan-karena izy, fa ny alika kosa no avy* ka nilelaka ny feriny.[*Na: ary ny alika koa dia avy] » (Lioka 16:21)
Raha araka ireo tenin'i Jesosy ireo dia toerana 2 ihany no afaka alehan'ny olona rehefa maty izy,
Na izy hitsahatra any amin'ilay toerana atao hoe "eo an-tratran'i abrahama", na izy hijaly amin'ilay toerana atao hoe "fiainan-tsihita" na koa hoe "helo"....
Inona no atao mba hovonjena isika
MINOA AN I JESOSY TOMPO IANAO RY NAMANA ISANY DIA HOVONJENA IANAO SY NY ANKOHONANAO!
rhaj0 - 24/04/2019 12:48
Fa tsy @ revy auto-flagellation-n'ny Kristiana (sasany) ve izany resakao izany ry RBNIR aa ?
HONO hoe rehefa mijaly marary sy maty (toa an'i Kristy tetsy @ hazo) dia mbo tena Kristiana koa.
RBNIR - 25/04/2019 15:52
Miainga avy amin'ny finoana an'i Jesosy aloha ny tena marina rhajo!
Mino v ianao fa tsy mpandainga i Jesosy? izay no tena zava-dehibe amin'Andriamanitra voalohany indrindra!
Hoy koa Jeosy hoe:
Raha misy olona iray irahin'i Jesosy ka misy mihaino dia mihaino an'i Jesosy ilay mpihaino izay.
Raha misy kosa mandà an'iny olona nirahin'i JEsosy iny dia mandà ani' Jesosy izy izay ary rehefa mandà an'i Jesosy dia mandà an'Andriamanitra Ilay naniraka an'i Jesosy...
Ary izy no tena fahotana mahafaty, fandavana an'Andriamanitra....